Best Ọnọdụ Na Europe ịzụ ahịa Site Train | Save A Train
Home > Travel Europe > Best Ọnọdụ Na Europe ịzụ ahịa Site Train
Best Ọnọdụ Na Europe ịzụ ahịa Site Train
site Udi sharir
Ingbọ oloko na Belgium, Inzọ Njem Italytali, Train Travel Switzerland, Train Travel The Netherlands, Zụọnụ Ndụmọdụ, Travel Europe
(Emelitere ikpeazụ On: 20/11/2020)
New ahụmahụ bụ ihe magburu onwe ebumnobi maka njem. Otú ọ dị, mgbe ụfọdụ a njem nleta-enyi na enyi n'anya ike ijide a kandụl ka a shopping spree, n'agbanyeghị otú nnukwu. Ndị mmadụ na-gaa ịzụ ahịa mara nke a, na e nwere ndị dabara nke ọma ọtụtụ obodo na Europe ebe ha nwere ike palitere ha na emefu ọchịchọ.
Otú ọ dị, ka nwere ihe ego na ume ekpe maka shopping, ọ bụ ezi echiche iji njem ọnụ ala ma ngwa ngwa. Na-na nke kacha mma obodo na Europe maka zụọ ahịa ụgbọ okporo ígwè na-emezu ma nke ndị ọnọdụ. Ka anyị nwere a lee anya na ndị bụ isi na shopping ebe na otú i nwere ike inwe na e jiri ụgbọ okporo ígwè:
Zụọ ahịa na Amsterdam, Netherlands
Amsterdam mara maka ọtụtụ ihe, na ya ụlọ ahịa ebe a bụ otu n'ime ha. Obodo awade ọtụtụ dị ukwuu nke shopping eme na ụdị, dabere na otú nnukwu gị ego bụ. Ọ bụrụ na ị na-achọ ụfọdụ upscale shopping, na P.C. Hoofstraat bụ n'okporo ámá n'ihi na ị. N'ihi na ngalaba na-echekwa na ụlọ ahịa ebe a, ị pụrụ kụrụ De Bijenkorf, Magna Plaza ma ọ bụ Kalvertoren.
De Negen Straatjes ma ọ bụ The Nine Okporo ámá na-ukwuu n'ihi na shoppers ọ bụrụ na ị chọrọ na-enweta ọtụtụ dị iche iche na-echekwa na ụzọ ozugbo. Ị nwere ike iru Amsterdam ụgbọ okporo ígwè mfe si kasị isi European obodo, tinyere Paris na Copenhagen.
Zụọ ahịa na Milan, Italy bụ anyị Ejiji ghota maka Best Ọnọdụ na Europe maka ppingzụ ahịa
A na-agụ Milan n’etiti obodo kacha mma na Europe maka ịzụ ahịa ebe ana-ewere ya dị ka isi obodo ejiji. Otú ọ dị, Milan bụghị naanị banyere The Fashion na elu-n'okporo ámá ejiji na Duomo ebe. E nwere ọtụtụ ebe ndị ọzọ inyocha, site na ụlọ ahịa mara mma nke ógbè Brera ruo mmetụta dị egwu na mpaghara Navigli. Milan bụ n'ezie a shopper si paradise. Ọ bụrụ na ị na-kpaliri mmasị ya, ị nwere ike ịga njem Milan mfe site okporo ígwè site Rome, Venice, nakwa dị ka obodo ndị ọzọ na Europe.
Genoa na Milan Ụgbọ oloko
Rome na Milan Ụgbọ oloko
Bologna na Milan Ụgbọ oloko
Florence na Milan Ụgbọ oloko
Ahụmahụ shoppers n'anya Zurich, karịsịa ndị nwere ike ime ka ndị kasị mma nke ya kasị oké ọnụ na-echekwa. Zurich bụ onye nke kasị mma obodo na Europe maka zụọ ahịa n'ihi na ọ na-ele dị iche iche karịa ọtụtụ metropolises. The Sihlcity shopping center na ahịa Glatt abụghị nnukwu shopping malls ị na-eleghị anya na-eji, ma ha na-enye a quality retail ahụmahụ.
Ndị ọzọ ọwọrọiso hotspots agụnye Bahnhofstrasse, Europaallee, na ebe gburugburu Langstrasse, karịsịa ma ọ bụrụ na ị chọrọ lelee Swiss na obodo mepere emepe imewe. Inweta n'ebe ụgbọ okporo ígwè na-adị mfe site na Berlin, Munich, Vienna, na obodo ukwu ndị ọzọ dị na Europe.
Interlaken na Zurich Ụgbọ oloko
Lucerne na Zurich Ụgbọ oloko
Bern na Zurich Ụgbọ oloko
Geneva na Zurich Trains
Berlin, Germany bụ kwa n'etiti Best Cities in Europe maka Shopping
Berlin di aha nke onye nke kasị mma obodo na Europe maka zụọ ahịa ya nnukwu retail distrikti ebe ị pụrụ ịchọta fọrọ nke nta ka ihe ọ bụla. N'ihi na ndị na miri akpa, Kurfurstendamm ma ọ bụ "Ku'damm" bụ a kwesịrị-nleta, mgbe ndị na a tighter mmefu ego ga-doro anya na enwe a njem na Tauentzienstrase. Dị ka a na-ewu ewu European ebe na a bụ isi obodo, Berlin bụ mfe pụrụ ime eme ụgbọ okporo ígwè si ọtụtụ obodo ndị ọzọ na Europe.
Munich na Berlin Ụgbọ oloko
Hanover na Berlin Ụgbọ oloko
Hamburg na Berlin Ụgbọ oloko
Otu n'ime ihe ndị na-eme ka Antwerp pụrụ iche shopping-maara ihe bụ ya ụwa na-ama diamond district. Otú ọ dị, Antwerp enweghị onye mmebe na Devid agụghị ndị gbara ụlọ ahịa, ochie na-echekwa ma ọ bụ na-ekwo ekwo ahịa ma. Ọ nwere ike na-enye a ahụmahụ pụrụ iche na niile shoppers, ọbụna ndị na-ike ime obi ụtọ. Ị nwere ike iru Antwerp ụgbọ okporo ígwè site Berlin, Paris, na obodo ndị ọzọ dị na Europe.
Njikere maka ụfọdụ oké shopping na ụfọdụ ndị kasị mma obodo na Europe? Akpara gị njem, na akwụkwọ gị gbaa ụgbọ okporo ígwè n'oge!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cities-europe-shopping-train%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/in_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / na / de ma ọ bụ / ru na ndị ọzọ asụsụ.
#traveleurope europetravel shopping ụgbọ oloko
Jide m ma ọ bụrụ na ị nwere ike, na ọ bụrụ na ị pụghị ịhụ m na Zọpụta A Train Blog - Ị nwere ike pịa ebe a iji ịkpọtụrụ m
Etu ị ga-esi chọta Ọnọdụ ibu dị na Italy
The kacha mma anyị hụtụrụla Train Njem Na Europe
Train Travel Austria, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Inzọ Njem Italytali, Train Travel Norway, Train Travel Scotland, Travel Europe
10 Ihunanya Ọnọdụ ileta na Germany
Njem ụgbọ oloko, Inzọ Njem Germany, Zụọnụ Ndụmọdụ, Travel Europe
Ihe ncheta ga -eweta site na njem?
12 Katidral kacha adọrọ mmasị na Europe
10 Ọtụtụ nkuzi golf dị egwu na Europe
10 Ihe ọcoụcoụ na -aba n'anya na -a Toụ iji nwalee n'ụwa niile